Home Wararka Maanta Muxuu ku saabsanaa shirkii deg degga ahaa ee ka dhacay xafiiska Rooble?...
Muxuu ku saabsanaa shirkii deg degga ahaa ee ka dhacay xafiiska Rooble? + Daawo
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, Maxamed Xuseen Rooble ayaa kulan deg deg ah isugu yeeray hay’adaha amniga dalka, kadib falalkii argagixisadu xalay ka geysteen qeybo kamid ah magaalada Muqdisho.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa shir-guddoomiyay kulankaas oo ahaa mid deg-deg ah, waxaana looga hadlay xoojinta amniga, xili ay dalka ka socoto doorashada Golaha Shacabka.
Kulanka uu Rooble iskugu yeeray saraakiisha ciidamada ayaa waxaa kasoo muuqday inta badan saraakiisha ciidamada, kuwaasi oo ay kamid ahaayeen taliyaha ciidamada Booliska Soomaaliyeed, taliyaha ciidanka dhulka, taliyaha ku-meel gaarka ah ee NISA iyo taliyaha ciidanka booliska qeybta gobolka Banaadir.
Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa ugu dambeyntiina faray saraakiisha kala duwan ee ciidamada inay qaadaan tallaabooyin dheeri ah oo lagu xoojinayo amniga.
Kulanka Rooble iyo Saraakiisha ciidamada ayaa imanaya saacado kadib markii ay qaraxyo iyo dagaallo toos ah xalay saq-dhexe ka dhaceen qaybo badan oo kamid ah magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya.
Weerarka koowaad oo ahaa mid xoogan ayaa waxaa lagu beegsaday saldhigga degmada Kaxda, waxaana gudaha u galay xubno ka tirsan Al-Shabaab oo weerarka ku qaaday halkaasi, waxay sidoo kale dab qabad-siisay qaybo ka mid ah saldhigga, kadibna waxaa la sheegay in dagaalyahanadu ay horey usii qaateen laba gaari oo nooca dagaalka ah.
Weerarka labaad ayaa isna ku bilowday qarax oo uu xigay dagaal toos ah waxaana lagu qaaday xaafadda Daarusalaam, waxaana la sheegay in qaraxa lagu weeraray guddoomiye ku xigeenka amniga ee degmada Heliwaa oo ku sugnaa halkaasi, waxaana ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh.
Sidoo kale xoogaga Al-Shabaab ayaa weeraray saldhigyo ku yaal Calamada ilaa Ceelasha Biyaha, halkaasi oo rasaas xoogan laga maqlay, kadib markii ay difaac adag kala hortageen ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM.
Si kastaba, weeraradan ayaa si xoogan looga dareemay guud ahaan caasimada oo dhan, xilli magaalada ay ka socoto doorashada kuraas ka mid ah xubnaha Golaha Shacabka.